Daawo Video: Villa Somalia oo farogelin ku haysa baarlamaanka Puntland (XOG) | Puntlandes.com
Daawo Video: Villa Somalia oo farogelin ku haysa baarlamaanka Puntland (XOG)
12 jan 2019 (Puntlandes) Villa Somalia ama kooxda la baxday Nabad iyo Nolol ayaa sida ay ogaatay Warbaahinta Puntlandes waxay faragelin ku haysaa Baarlamaanka Puntland, iyadoo guddoomiye uga dhigtay nin u shaqaynaya sidii Gacal-kii Galmudug.
Sidoo kale waxay kooxdu madaxweyne ku xigeenka Puntland ku caawisay inuu ku guulaysto Axmed Karaash, oo isna loo shaqaalaysiiyey inuu noqdo Carabey-ga Puntland.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Dhoobo ayey N&N kala balameen inuu MOOSHIN ka keeno Madaxweynaha cusub ee Puntland iyo xukuumada uu soo dhisi doono haddii ay kabaqaad u noqon waayaan iyaga.
Wadanku waa Federaal awooduna waa baahsan tahay, mas’uuliyadda hogaamineed ee Puntland waxay saaran tahay sida ku cad dastuurka Xukuumada Puntland oo madaxweynuhu hogaanka u hayo, waana ilhaano in madaxweyne iyo Xukuumadiisa la dhaho “Nin baa boorso ku wata” daawo muuqalka senatow Saciido.!!!!
Waa kuma Gudoomiye Dhoobo?
Dhoobo wuxuu ahaan jiray Qaadwale, wuxuuna kasoo galay Puntland dhanka Somailand, isagoo markii dambana ku biiray urur diineedka xagirka ah ee Ixtisaam, kaas oo Fahad Yaasiin uu dhanka siyaasadda ku hogaansho.
Gudoomiye Dhoobo wuxuu si toos ah uga amar qaataa Fahad Yaasiin iyo N&N, waxaana ogaanay in aysan ku qanacsanayn N&N madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Siciid Deni.
Dhoobo ayaa waxaa ku caawiyey inuu noqdo gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Villa Somalia ama Nabad iyo Nolol, iyagoo ujeedadoodu ahayd inay Mooshinkii Baarlamaanka Muqdisho usoo raraan Garowe kadibna ay Mooshin ka keenaan madaxweyanaha Puntland haddii uusan iyaga kaboqaad u noqon.
Dhoobo Shaqadii uu Gacal Casiir N&N uga hayey Galmumudug ayaa loo qortay, wuxuuna wali isticmaalayaa erayadii ololaha Doorasha Doorashada isagoo ka dhacsan inay doorashadii dhamaatay loona baahan yahay in shacabku la mideeyo lagana ilaaliyo eraya xanafta leh.
Dhoobo wuxuusan fahasanayn in ay dawladnimada Soomaaliya ay dib u dhisme ku jirto, iyadoo baadi goob loogu jiro sidii dawlad Soomaaliyeed dib loogu yagleeli lahaa.
Ha ogaadaan N&N in madaxweynaha Puntland ay mas’uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta danaha Puntland iyo ilaalinta waxa Soomaaliyi wada leedahay, uuna haysto shacab ilaashana dawladnimadooda iyo danahooda.